Samsung oo dib u sii dhigtay suuq gaynta Galaxy Note 7 - BBC News Somali
Samsung oo dib u sii dhigtay suuq gaynta Galaxy Note 7
Shirkadda Samsung ayaa sheegtay in ay dib u sii dhigayso iibinta taleefankeeda Galaxy Note 7.
Shirkaddu waxay sheegtay in aysan ka bilaabaynin iibinta taleefan kan suuqyada dalka Kuuriyada Koonfureed sababtana waxay ku sheegtay in ay u baahan tahay in ay wakhti dheeri ah siiso dib u soo celinta taleefanada ee caalamka oo dhan.
Shirkadan dhanka tiknoolajiyadda ka shaqaysa ee laga leeyahay Kuuriyada Koonfureed ayaa ku qasbanaatay in ay dib ugu yeerto 2.5 milyan oo taleefan oo dunida dacaladeeda loo suuq geeyay, ka dib markii ay ciladi gashay baytariga taleefanka cusub ee Galaxy Note 7.
Lahaanshaha sawirka ARIEL GONZALEZ
Image caption Shirkadu in ay dib u soo celiso taleefanadii ay gaday wxaa ku qaaday ka dib markii la sheegay in qaarkood ay qarxayaan.
Waxaa la sheegay in daraasiin ka mid ah taleefanadaasi uu dab ka kacay.
Markii hore qorshuhu wuxuu ahaa in suuqyada dib loogu soo celiyo sideed iyo labaatanka bishan sagaalaad, laakiin hadda waxaa la filayaa in uusan suuqyada soo galin kawda bisha tobnaad wixii ka horeeya.
Labadii bisha sagaalaad ayay shirkadda Samsung sheegtay in ay joojinayso iibinta taleefankan waxayna dadkii iibsaday u soo bandhigtay in ay mid kale ku badashaan. Shirkaddu waxaa kale oo ay ku baaqday in la joojiyo isticmaalka Taleefankaas.
Dib u soo celintan wuxuu saameeyay 10 suuq oo adduunka ku kala yaala. Dalka Kuuriyada Koonfureed oo kali dad lagu qiyaasay 200,000 oo macaamiil ah ayaa dib u soo celiyay taleefannadii ay gateen, waxaana jira dad aan wali soo celinin sida ay sheegtay shirkadda Samsung.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in suuqyada u soo horeeya ee taleefanka laga heli doono bisha soo socota ay noqon doonaan kuwa kuyaalla dalalka Australia iyo Singapore.